Wararka - Codsiga iyo astaamaha shaandhaynta laba -geesoodka ah
Shaandhaynta duplex ayaa sidoo kale loo yaqaan shaandhaynta beddelka duplex. Waxay ka samaysan tahay laba shaandheeye oo birta ka samaysan oo siman. Waxay leedahay faa'iidooyin badan, sida qaab-dhismeedka cusub iyo qaab-dhismeedka macquulka ah, waxqabadka shaabadaynta wanaagsan, awoodda wareegga oo xoog leh, hawlgal fudud, iwm. Gaar ahaan, shaandhaynta daadinta dhinaca shaandhada ayaa yar, taas oo si sax ah u hubin karta saxnaanta shaandhaynta, oo si dhakhso leh u beddeli karta bacda shaandhada, shaandhayntuna asal ahaan ma laha adeegsi maadi ah, si qiimaha hawlgalka loo yareeyo. Shaandhaynta laba -geesoodka ahi waxay ka samaysan tahay bir bir ah, oo ka kooban laba foosto oo cylindrical ah. Waa qaab-dhisme alxanka ka samaysan bir-lakabka ah. Oogada gudaha iyo dibaddaba waa la miiray, dushana waxaa lagu qalabeeyay hawo -mareenka, si loogu isticmaali karo in gaaska lagu sii daayo inta lagu jiro hawlgalka. Wadajirka biibiilaha ayaa qaadanaya isku -darka isku -dhafan. Ka dib markii 0.3MPa tijaabada korontada, bedelka ciidda dunta tee waa dabacsanaan. Qalabku wuxuu leeyahay qaab -dhismeed is haysta, hawlgal habboon iyo dayactir fudud.
Shaandhaynta laba -geeslaha ah ayaa inta badan loo adeegsadaa ka shaqaynta dawaynta dhaqanka Shiinaha, dawada reer galbeedka, casiirka miraha, casiirka sonkorta, caanaha, cabitaanka iyo dareeraha kale
Laba nooc oo wasakh ah oo adag ama colloidal ah ayaa la sifeeyaa, labada shaandheynna si ka duwan ayaa loo isticmaalaa, taas oo la nadiifin karo iyada oo aan la joojin mashiinka
Shabakadda si joogto ah ayaa loo isticmaalaa.
Mashiinkani wuxuu leeyahay furitaan dhakhso leh, xidhitaan dhakhso leh, kala-bax degdeg ah, nadiifin dhakhso leh, shaandhayn dhakhso badan leh, aag dabaq yar ah iyo saamayn adeegsi oo wanaagsan.
Mashiinkani wuxuu isticmaali karaa sifeynta cadaadiska bamka ama sifeynta nuugista faaruq.
Shaandhada shaandhaynta ee mashiinkani waa nooc jiif ah, oo aan hoos u dhicin oo dillaacin lakabka shaandhada iyo dareeraha haraaga ah. Marka la barbardhigo saxaafadda shaandhaynta jiifta, hufnaanta waxaa kordhay 50%.
3. Qalabka la isticmaalo
Qalabka oo dhan ayaa ka samaysan bir bir ah.
Xulashada shaashadda: (1) shaashadda birta ka samaysan (2) maro shaandheyn (3) warqad shaandheyn ah oo dhex marta mashiinka si aad u kala saarto hakinta, waxaad heli kartaa dareere cad ama agab adag. Waxay waafaqsan tahay sharciga dawada iyo nadaafadda cuntada waxayna buuxisaa heerka GMP.